Pink: Mgbe Azụmahịa Dịghị Nrọ | Martech Zone
Mgbe nwa m nwanyị dị afọ iri na ise jiri akpa nzuzo Victoria n'aka bata n'ụlọ, ọ fọrọ nke nta ka m nwee ọrịa strok. Ana m anabata nkwupụta niile dị na post a gbasara oke nna m ga-abụ yana na m kwesịrị ileba anya na nwa m nwanyị ịzụ ahịa.
N'ikwu eziokwu, echeghị m na ọ nwere ihe kpatara ya ga-eji zụọ ahịa na Victoria Secret ruo ọtụtụ afọ. Know mara… mgbe m nwụrụ.
All ndị ụmụ m nwanyị 'enyi yi otu nkecha ekike ugbu a… labeled Pink n'ofe ha. Achọpụtara m na ọ bụ akara ọhụụ, akpọrọ aha ya iji dọta ụmụ agbọghọ. Na-egosi na m ziri ezi, mana amaghị m na Victoria Secret nọ n'azụ ya. Ihe nzuzo Victoria na-aga naanị ha Pink akara - ya na ebe nrụọrụ weebụ Pink, akara Collegiate nke Pink, netwọk mmekọrịta akpọrọ Mba Pink - na ị nwere ike nyochaa na Facebook n'ezie, music, downloads na ọbụna a t-uwe elu mmebe.
Enwere m ike ịghọta na Victoria Secret chọrọ ịbawanye mkpokọta ya wee ruo otu igwe mmadụ dị iche iche, mana ịgbada n'ime ndị ntorobịa na-eto eto dị nso na ụlọ. Dị ka ezigbo enyi Adam Small (Indianapolis Mobile Ahịa) kwuru n'ụzọ zuru oke,
Pink yiri ka ọ bụ ọgwụ ọnụ ụzọ maka Victoria Secret iji mee ka ụmụ agbọghọ banye na akara ha n'oge ochie.
O wutere m nke ukwuu, O doro anya na Victoria Secret amatala ụmụaka na-eto eto dị ka ohere ahịa ọhụrụ. Uwe ndị ahụ dị ọnụ ala karịa ndị ha na ya bụ Abercrombie & Fitch na Hollister… ọ pụtara ndị na-eto eto na-ebelata mmefu dị ka onye ọ bụla.
Onwe m, achọrọ m ka akara ngwaahịa ahụ dị oke ọnụ maka nwa m 15.
Jun 2, 2009 na 1:42 AM
Ọ dị nwute na enweghị m ike ikwu ihe ị chọrọ ịnụ, alụrụ m otu izu mgbe m gbasịrị afọ 17. Amaara m ihe ọ na-adị ka nwanyị / nwatakịrị. Nke a bụ oge siri ike maka ụmụ agbọghọ, na mberede ụwa niile na-ele ha, ha bụkwa ụmụ nwanyị, ọ bụghị ụmụ agbọghọ. My naanị ndụmọdụ bụ ijide n'aka na ọ maara otú ị hụrụ ya n'anya ma na-e maka ya - n'agbanyeghị ihe - na-enye ọtụtụ nke ohere ya na-na ihe ịma aka ọrụ na ibu ọrụ nke mere na ọ nwere ike na-arụ ọrụ na-eto eto. Gbaa mbọ hụ na ọ ma na ọ dị mma ka ụmụnwoke jiri ya na nkwanye ugwu, ma nọrọkwa ebe ahụ ijide ya mgbe ọ dara. (Nke a ọ dị ka kaadị ekele? Ndo) N'ihe PINK, achọpụtara m na n'ụlọ ọrụ ụfọdụ ụmụ agbọghọ bidoro izipu ozi ịntanetị azụmahịa n'ụdị pink, nke dị iche? Ma ugbua ka m mere okenye, ekwenyere m, ọ dị m ka ya bụrụ na azụmaahịa nke mmekọrịta ụmụ nwanyị na-eto eto abụghị ihe ama ama - ma ọ bụ anabatara ya.
Jun 2, 2009 na 5:15 AM
Na - enyere aka mee ka o doo m anya otu ihe, ọ bụ ya mere ọtụtụ ụmụ agbọghọ ji nwee okwu PINK na isi ha. Ugbu a ka m matara! Daalụ maka m ịkụziri m na inye m fodder ma ọ bụrụ na nwa m nwaanyị 8 afọ mgbe ọ bụla na-arịọ maka ụfọdụ PINKwear. Agaghị eme (maka nke ahụ bụ).